Kukholelwa ukuba ukukhishwa kweekhemikhali akuyingozi ekusebenziseni, kodwa kubalulekile ukuqwalasela ezinye izilumkiso. Ukongezelela, iphuzu elibaluleke kakhulu kukunyamekela kwesikhumba emva kokukhangela imichiza.
Ukuqala oko kuyimfuneko ukugqithisa uvavanyo ukujonga uhlobo lwekhumba, njengoko kuyimfuneko ukwazi ukuphendulwa kwendlela yokwenza imichiza. Kufuneka uqaphele kwaye ke ngoko uqale ukuzama ukusebenzisa isicelo sokukhanya okulula kwinyanga. Xa isikhumba sisetyenziswe kwinkqubo enjalo, unokwazi ukuya kwi-peeling average. Umyinge wepeeling uza kufumana iziphumo ezingcono.
Emva kwenkqubo yokukhusela ulusu, ungasebenzisa i-lotic suntic lotion. Iintlungu ezibuhlungu ngexesha lokupasa ziya kuxhomekeka kububanzi bokungena kwayo. Ukuba ukukhangela kungenasiphelo, ngoko kuya kusebenza kuphela kwinqanaba eliphezulu lesikhumba. Xa kunjalo, ukugqithisa okuninzi okunokuthi kwenzeke yinto enokutshisa. Ukusetyenziswa kweepelisi ezinzulu sele kubangele ubuhlungu. Ngoko ke, amaxesha amaninzi anqunywe ngokudibanisa neentlungu zonyango, kubandakanye nalabo abane-intravenous, abanceda ukujamelana nentlungu.
Ukuba ulusu lubuhlungu kakhulu, ngoko kulungele ukwazisa ugqirha, ngoko uya kukhetha ukhetho olufanelekileyo kakhulu kuzo zonke iintlobo ezaziswa kwiimarike.
Ukunyamekela emva kokupasa
Emva kwe-chemical peel, ngamanye amaxesha akukho ntlungu nje kuphela, kodwa i-itch. Le nkqubo yendalo, njengoko ulusu luphilisa. Ukuphelisa ukubola, imithi ethile imiselwe. Kubalulekile ukulandela iingcebiso zogqirha ngokuchanekileyo, ezithe zafunyanwa, ngaphandle koko ungasifaka isifo okanye isikhumba sinokubonakala sibonakala, kwaye akukho mntu ufuna ukuba neengxaki kwesikhumba aze abone ukungonakaliswa kwimeko yakhe.
Umphumo oqhelekileyo wesigxina ngumsindo ovuthayo. Ngethuba le mvakalelo ayikude kwaye ayifuni i-anesthesia. I-anesthesia elula ifunekayo xa usebenzisa ubunzulu obunzulu okanye i-phenolic. Ulusu emva kokubumba, njengomthetho, libukeka lonakaliswe, libomvu kwaye ludumale. Ngamanye amaxesha iibhobho zamanzi zivela esikhumbeni, zivela ngenxa yeenkqubo zokwenza utywala, apho i-liquid iyenzeka phezu kwesikhumba.
Inkathalo enkulu emva kokuba inkqubo yondlo kunye nokunyanzela. Ukuhlanjululwa kunye nokuhlanjiswa kweso sihlala kukhokelela ekubandezelekeni kwesikhumba, okubangela ukuvuvukala nokukhwaza.
Ukunqongophala kuninzi kakhulu. Ubangela ubomvu obuncinane kwaye bugqitha kwiiyure ezimbalwa. Emva kokucoca, ulusu lufuna ukugqutywa ngetoniki, ehlambulula ii-pores ize ibanciphise. Emva koko, sebenzisa i-gel yokunyusa. Ukunyamekela imihla ngemihla isebenzisa ubunzima bemveliso, equkethe i-tonic kunye ne-moisturizer.
Ukupasa okuphakathi kweMedian kufuna ukuba unakekele ukunakekelwa kakhudlwana. Emva kwonyango kunye nale nkcazo, i-tautness, ubomvu nokuvuvukala kubonakala. Ukuphazamiseka kwesikhumba kunokuhlala kwiintsuku ezintlanu - konke oku kulungile ukuhlala ekhaya. Kuphela ixesha lokubuyisela lithatha inyanga.
Kukho ukucocwa okunzulu kobuso. Kule meko, iziqhamo zamacidi kunye nezinye iikhemikhali ezinamandla zisetyenzisiweyo. Ukuqhuba inkqubo enjalo kuyimfuneko kwi-dermatologist esibhedlele. Ininzi enkulu ingqalelo ihlawulwa kwi-hygiene, kuba ngeli xesha isikhumba siphephekile kwaye sibuhlungu. Ukubuyisela umgca wokukhawulela usebenzise i-sparing foams, i-gels, enesakhiwo esibucayi.
Xa izikhetho zezinto zokuzongamela zikhethwa, kwaye zikhokelwa ngcebiso ye-cosmetologist, kodwa ungayikhohlwa malunga neemvakalelo zakho. Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ngokubunjwa kwemali. Isikhumba sinesidingo sokunyusa, ukunciphisa kunye nezondlo ezondla. Ukuba ulusu luyakucasula, ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukusebenzisa iingubo zokukhusela. Ukuba kukho iingxaki, qiniseka ukuba ubone ugqirha.
Emva kwenkqubo, musa ukuya echibini lokubhukuda kunye ne-sauna, imisebenzi yomzimba, nayo, kufuneka incishiswe. Gwema ukukhanya kwelanga, kwaye xa ilanga ilungele ukusebenzisa izixhobo zokukhusela.
Ukunyamekela kwesokhaya ekhaya
Ukupheka kweempawu ezixhamlayo ngobuso
Amaski okubheka ubuso obunobumba obomvu
Ukunyamekela isikhumba esinamafutha ehlobo
Iiloto zeBotox, iingcebiso zoogqirha
Iindlela zokupheka ezithandekayo ze-capkake: i-tshokoleta, i-curd, ne-mastic
Iimaski zokujongana necocoa ekhaya
Iziqhamo zerharnate: izakhiwo eziwusizo
Isaladi kunye neodle nemifuno
I cookies kwi-margarine
U-Ivan Okhlobystin uthetha ngeenzuzo zokuthi "
Ikhekhe leshokoleta nge espresso
Ulwalamano olukhululekile: kunye nokuchasene
Ukupheka: zokupheka, imifuno yemifuno
Indlela yokwenza amabele akho aphelele: I-Bra, i-peeling, iivithamini
Ngaba ndinokuphilisa i-furunculosis engapheliyo
Ukulahla ekuphuhlisweni komntwana: yonke into ofuna ukuyifumana
U-Alla Pugacheva wanquma ukumangalela no-Irson Kudikova
Ukuphuhliswa kwengqondo kwabantwana abangaphantsi komnyaka omnye